Homeसमाचारभाइरल चियावालीको घर पहिलो पटक पुग्दा, श्रीमानको बारेमा यस्तो भन्छन् परिवार (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 31, 2021 admin समाचार 5940
सामाजिक स’ञ्जालमा भाइरल भएकी चियावाली भनेर चिनिएकी श्रृष्टिको घर परिवार कस्तो होला ? भन्ने सबैलाई ला’गेको थियो । उनी विहान ३ वजे नै उठेर आफ्नो सानो छोरीलाई पिठ्युमा बोकेर काम गरेको भिडियो सार्व’जनिक भएको थियो । उनको यो संघर्षको कथा सार्वजनिक भएपछि उनीबारे चर्चा सुरु भयो । उनको संघ’र्षको कथा अरुका लागि प्रेरणादायी बनेको छ ।
काठमाडौ जस्तो ठाउँमा सानो छोरी हुर्का’उँदै सडकमा चिया बेच्दै गरेकी श्रृष्टिको कथा वास्त’वमै प्रेरणादायी छ । जस्तो सुकै अप्ठेरोमा पनि आफ्नो कर्तब्य विर्सनु हुँदैन भन्ने कुराको उदाहरण उनले २ वर्षकी छोरीको भविष्यका लागि गरेको संघर्षले देखा’उँछ । काम ठूलो सानो हुँदैन इमान्दारीता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनको संघर्षले देखाउँछ । आफुलाई धोका दिएका श्रीमान प्रति पनि श्रृष्टिको कुनै गुना’सो छैन ।
नुवा’कोट स्थित माइती निकै विकट ठाउँमा छ । उनको वृद्ध आमा भन्छिन्, छोरीले संघर्ष गरेको भिडियो’मा देखेर निकै खुसी लाग्यो । भाईलाई भने आफ्ना भिनाजुले यस्तो धोका दिएको कुरा थाहा नभएको बता’एका छन् । भाईले आफ्नो भिनाजुसंग यसवारेमा कुरा गर्ने बताएका छन् । वृद्ध अवस्थाकी आमा अहिले पनि संघर्ष नै गरेकी रहेछन् । उनकै प्रेरणाले होला छोरी श्रृष्टिमा पनि त्यो हिम्मत आएको हुन’सक्छ ।
श्रृष्टिको आमाले छोरीको भिडियो युट्यु’वमा हेरेको बताइन् । नातिनी बोकेर छो’रीले विहानै चिया बसेको देखेपछि आमा भन्छिन्, अब दुख गर्ने पर्यो नि, सुख मात्र हुँदैन जिवनमा दुख पनि गर्न पर्यो नी आमा भन्छिन् । भाईले दिदीको भिडियो मोवा’इलमा सेभ गरेर राखेको बताएका छन् । उनले त्यो भिडियो आमालाई देखा’उँदा आमा रोएको पनि सुनाए ।
उनी भन्छिन्, अब राज्यको काम गरेर खा, जिवन यस्तै रहेछ के गर्ने ? उनको बहिनी सारा’ले पहिलो पटक आफ्नो दिदीको भिडियो हेरेको बताइन् । सुरुमा हेर्दा छक्क परेको बताइन् । खुसी पनि लाग्यो तर दिदीले यस्तो संघर्ष गरेको रहेछ भन्ने जानेर भने दुख लागेको ब’ताइन् । – इताजा खबरबाट
सपनालाई फेरि मिल्यो अर्को सम्मान, सपनाको लागी मन्त्री आफैले गाए यतिमिठो गीत (भिडियो सहित)
अशोक दर्जीकी फुपु क्यान्सर रोगी, उपचार गर्ने पैसा नभएर यस्तो बि ‘चल्ली (भिडियो हेर्नुस्)
February 10, 2022 admin समाचार 1512
विशेष गरेर सामाजिक सञ्जा’ल र युट्युबमा उनको लोकप्रियता बढ्दो छ । युट्युबमा हिट बनेका बनेका दर्जीमा यतिबेला निकै परिर्वतन आएको छ । चलचि’त्रको कथा र पात्र जस्तै लाग्छ अशोक दर्जीको जीवनकहानी पनि । आर्थिक अवस्था
नेपाली कांग्रेस बुढीगंगा- ३ को चुनाव केन्द्रित प्रचारप्रसार समिति गठन
April 23, 2022 admin समाचार 1099
मोरङ, बुढीगंगा/ टेकेन्द्र ओझा : नेपाली कांग्रेस बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ ले नेका वडा सभापति किरण चौधरीको संयोजकत्वमा निर्वाचन प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ । आउँदो वैशाख ३० को स्थानीय निकायको चुनाव केन्द्रित
March 12, 2021 admin समाचार 5542
शुक्रबार नेपाली ब’जारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबारको तुल’नामा बिहीबार सुनको मूल्य केही बढेपनि शु’क्रबार पुनः घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यव’सायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ८६ हजार २०० रुपैयाँमा कारो’बार